• Universal Robot Kit ဆိုတာ ဘာလဲ?
Phoewa Science ရဲ့ Universal Robot Kit ဟာ Robotics ကို စိတ်ပါဝင်စား တဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်ဖို့နဲ့ အချိန်တိုအတွင်း Educational Robot တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ Learning Kit တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Arduino Compatible Kit တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Arduino Uno သို့မဟုတ် Nano တပ်ဆင်ပြီး Project ကို စတင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြုလုပ်လိုတဲ့ Robotic Project အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Sensor တွေနဲ့ Module တွေကို Kit မှာ တပ်ဆင်ပြီး Arduino IDE မှတဆင့် Program ထည့်သွင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
• ဒီ Robot Kit နဲ့ ဘာတွေ ဖန်တီးနိုင်မလဲ?
Universal Robot Kit ဖြစ်တဲ့အတွက် Project အမျိုးမျိုး လေ့လာပြီး ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ Bluetooth Control Robot, Line Follower Robot, Obstacle Avoiding Robot တွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့အပြင် တခြားသော Function တွေကိုလည်း ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျထပ်ဖြည့်ပြီး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
• Kit ထဲမှာ ဘာတွေ ပါဝင်မှာလဲ?
Robot Kit ထဲမှာ ပါဝင်မယ့် ပစ္စည်းတွေကတော့ -
1) Robot Chassis and pieces
Plywood နဲ့ Laser Cutting Design ထုတ်ထားပြီး Sensor တွေ၊ motor တွေအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်တဲ့ Robot Frame နဲ့ လိုအပ်တဲ့ Nut တွေ၊ Circuit Holder တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2) Arduino Uno or Nano x 1
ကိုယ်အသုံးပြုလိုတဲ့ Arduino board အမျိုးအစားအလိုက် မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Arduino Nano သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ mini breadboard တစ်ခုလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
3) SG90 9g Servo Motor x 2
Robot ရဲ့ wheel တွေအတွက် 9g Servo Motor ၂လုံးကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်အားဖြင့်တော့ Servo Motor တွေဟာ 180 Degree သာ လည်ပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် wheel အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ 360 Degree လည်ပတ်နိုင်အောင် Servo တွေကို circuit ဖြုတ်ကာ Hack ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
4) HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor x 1
Ultrasonic Sensor ကိုတော့ Phoewa Robot Kit ရဲ့ မျက်လုံးအဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ သူက Robot ရဲ့ ရှေ့မှာရှိတဲ့ အတားအဆီး Object တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ Distance ကို တွက်ချက်ပေးပါတယ်။
5) L298N Motor Driver x 1
DC motor ၂လုံးကို မောင်းနှင်ပေးတဲ့ H-bridge Motor Driver ဖြစ်ပါတယ်။ Arduino board မှ ပေးပို့တဲ့ Forward, Backward, Left, Right အစရှိသဖြင့် signal များကို လက်ခံရယူပြီး မောင်းနှင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
6) Tracking Sensor x 2
Line Follower Robot တည်ဆောက်တဲ့အခါ တပ်ဆင်အသုံးပြုရမယ့် Sensor ဖြစ်ပါတယ်။
7) Bluetooth Module x 1
Android App မှတစ်ဆင့် wireless bluetooth control project ပြုလုပ်တဲ့အခါ တပ်ဆင်အသုံးပြုရမယ့် module ဖြစ်ပါတယ်။
8) AA battery Holder, Switch, Piezo Buzzer, Jumper Wires, Caster Free Wheel, Screw driver အစရှိသဖြင့် ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (Except AA batteries)
• ဘယ် Programming Language ကို အသုံးပြု လေ့လာရပါသလဲ?
Arduino IDE ကို အသုံးပြုပြီး Arduino C Programming Language အသုံးပြု လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ C Language ဆိုပေမယ့် C စစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူး။ Arduino အတွက် modify ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Arduino C Language ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရ လွယ်ကူမှာပါ။ ပြီးတော့ ခုမှစတင်လေ့လာမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်လည်း တည်ဆောက်ပုံတွေ၊ Project Code File တွေ၊ Tutorial တွေနဲ့ Schematic Diagram တွေလည်း Kit ထဲမှာ ထည့်ပေးထားဦးမှာပါ။
• Robot Kit ရဲ့ ဈေးနှုန်းလေး ပြောပြပါဦး?
Project မျိုးစုံတည်ဆောက် လေ့လာနိုင်မယ့် Advanced Kit အနေနဲ့ဆိုရင် Sensor တွေ၊ Module တွေ အစုံပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Arduino Uno ပါဝင်တဲ့ Advanced Kit ဆိုရင် 45,000 Ks ဖြစ်ပြီးတော့ Arduino Nano + mini breadboard ပါဝင်တဲ့ Advanced Kit ဆိုရင် 43,000 Ks ဖြစ်ပါတယ်။ Basic Kit အနေနဲ့ပဲ မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ Bluetooth Module နဲ့ Tracking Sensors များ ပါဝင်မှာမဟုတ်ပဲ 32,000 Ks ဖြစ်ပါတယ်။
• Robot Frame သပ်သပ်ပဲ ဝယ်လို့ရနိုင်မလား?
Kickstarter ရဲ့ Open Source Project ကို Phoewa Science မှ Design ဆွဲထားတဲ့ Plywood Laser Cutting Design Robot Frame ကို အမြတ်အစွန်း လုံးဝယူမထားပဲ ရောင်းပေးမှာပါ။ Frame နဲ့အတူ Caster Free Wheel နဲ့ လိုအပ်တဲ့ Screw တွေ၊ Nut တွေ အားလုံးပါဝင်မှာပါ။ ၁၁,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
• သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေရှိမလဲ?
Kit မှာ ပါဝင်တဲ့ board, sensor, module တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ဝယ်ယူတဲ့ဈေးနှုန်းထက် သက်သာအောင်လျှော့ပေးထားတဲ့အတွက် Low Cost ဖြစ်ပါတယ်။ DIY (Do It Yourself) Kit တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးလွယ်ကူစွာ လေ့လာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Small, Fun and easy to build ဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးများနဲ့ လူငယ်များ Educational Robotic ဆိုင်ရာ လေ့လာသင်ကြားပေးဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ Arduino Compatible ဖြစ်တာကြောင့် လေ့လာရလွယ်ကူတဲ့ Arduino C Programming Language နဲ့ စတင်နိုင်ပြီး Great Intro to Robotics ဖြစ်တဲ့ Kit တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Open Source Hardware, Open Source Robot Kit ဖြစ်လို့လည်း customize ပြုလုပ်နိုင်ပြီး project code file တွေကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ လေ့လာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Arduino Microcontroller ကို ခုမှ စတင်လေ့လာမယ့်သူတွေအနေနဲ့ Robot Kit နဲ့ပတ်သက်လို့ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိရင်လည်း Page မှာ message ပို့ မေးမြန်းနိုင်သလို၊ Email ပေးပို့ပြီးလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
[…] Robot Kit အကြောင်း အပြည့်အစုံကို >> ဒီမှာ << သွားရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ […]